Iska ilaali bisha ugu horreysa ee Israa'iil soo degto - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA »Iska ilaali bisha ugu horreysa ee Israa'iil soo degto - BGR
Iska ilaali bisha ugu horreysa ee Israa'iil soo degto - BGR
Waxay ahayd dhowr todobaad tan iyo markii Israel ay billowday hannaan door ah oo khaas ah oo maalgalin ah oo ay ku degtay Earth Moon. bilowgii way adag tahay halka pride ogaa cillad ah computer la yaab leh in isaga reebay dhameysatay safar uu si kastana falagiisuu dhex Labiyo jadwalka, laakiin waxa uu si deg deg ah dib uu dhabbihii. si ay u sameeyaan caga a on moon aan dhan u socday inay ku raaxaystaan.
Boosharka, oo la yidhaahdo Beresheet, waa in ay bilaabaan maneuvering oo ku saabsan 15h05. EST maanta, oo waxaad arki kartaa wax kasta oo nool halkan.
Daaqada video-ka ee hoos ku qoran ayaa la heli doonaa wax yar ka hor howlgalka bilawga ah, iyo SpaceIL, kooxda gaarka loo leeyahay ee la maal-galiyo, waxay martigelin doonaan bandhigga. .
Haddii guul laga gaaro, hawlgalku wuxuu reer binu Israa'iil ka dhigi doonaa dal afraad oo si guul leh u soo degay dhul dushooda dusha sare ah. Kaliya Maraykanka, Ruushka (USSR) iyo Shiinaha ayaa ku guuleystay filimka, sidoo kale Mashruuca SpaceIL wuxuu sidoo kale noqon doonaa kii ugu horreeyay ee maal-galinta khaaska ah ee soo galaya taariikhda.
degtey ayaa ka dhacay SpaceIL dheer asal ahaan in ay ka qayb ee tartanka Google Lunar XPrize dhamaaday oo aan xafladda, midkoodna u tartameen ayaa awooday in ay samatabbixin pride ah oo awood u leh soo degtey on time.
Hawlgalku laftiisu waa mid cidhiidhi ah, ama ugu yaraan sidii loogu talagalay iyadoo laga yaabo in la siiyo caqabadaha ka dhasha dhulka Moon. LG ma laha himilooyin cilmi ah oo lagu dhammeeyo marka uu dhulku jiro oo uusan haysan qalab taxane ah oo lagu gudbiyo xogta iyo macluumaadka ku saabsan Dunida. Noloshiisa mar marka dusha sare ee gogolka gaaban ayaa noqon doonta mid gaaban, laakiin haddii ay dhacdo hal mar, waxay weli noqon doontaa guusha weyn ee SpaceIL iyo Israel.
Source source: NASA
Cilmi-baadhayaashu waxay heleen qalab qadiimi ah oo xayawaan ah 45 gacanta - BGR
Ma ogtahay? Xayawaanka badda qaarkood waxay tuuraan guska kadib galmada
Morocco: Boqolaal dibadbaxayaal ah ayaa dalbaday in la sii daayo Hirak maxbuuskeeda - JeuneAfrique.com
Laga soo bilaabo Conakry ilaa Abidjan, iyada oo loo marayo Lomé, 18 000 ton oo bariis ah oo burbursan - JeuneAfrique.com
Deynka 231 ee ka socda BDEAC ilaa lix dal oo Afrikaan ah oo Afrikaan ah - JeuneAfrique.com
Nin ayaa waxaa la gooyey saacadaha 12 ka dib markii uu cunayo suxuun - SANTE PLUS MAG
TALOOYINKA: XASAASKA CINWAANKA EE CIIDAMADA DIY
DADKA & LIFESTYLE3,107